The Rohingya News Bank : ဗလီ
Showing posts with label ဗလီ. Show all posts
အစိုးရခွင့်ပြုချက်ရ ဗလီကို ပိတ်ပေးဖို့ အမျိုးသားရေး လူတစု တောင်းဆို
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ် ၁၀၆ ရပ်ကွက်က ပိတ်ထားတဲ့ အစ္စလာမ်ဝတ်ပြုဆောင်အတွင်းက ခြေလက်ဆေးတဲ့နေရာကို ၂၀၁၉ မေ ၁၆ ရက်နေ့က ဖျက်ပေးနေစဉ်
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဥပုသ်လအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ဝတ်ပြုခွင့်ပြုထားသော ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၂၆ ရပ်ကွက်က ဝတ်ပြု အဆောက်အအုံတစ်ခုကို မေလ ၁၄ ရက်နေ့ညက လူ ရာဂ ဏန်းလောက်က ပိတ်ပင်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကို RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးသစ်ဆင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2019, mm, RFA Burmese, ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း, ဗလီ, ဘာသာရေးပိတ်ပင်မှု, သတင်း
( 23-03-2018 ) ဘူးသီး ​တောင်​ ငါးရန်​​ချောင်း ​ကျေးရွာ အုပ်​စု ၊ ယင်းမရွာ ရှိ ဗလီ ​ကျောင်း များကို ဖြိုဖျက်​ ဆီး
ဘူးသီး ​တောင်​ ငါးရန်​​ချောင်း ​ကျေးရွာ အုပ်​စု ၊ ယင်းမရွာ ရှိ ဗလီ ​ကျောင်း များကို ဖြိုဖျက်​ ဆီး၍ ဗလီ​ကျောင်း က သစ်​​ကောင်း သစ်​များကို ခိုးယူ သယ်​​ဆောင်​ သွားသည်​။
ဘူးသီ​တောင်​မြို့. ငါးရန်​​ချောင်း ​ကျေးရွာ အုပ်​စု ယင်းမရွာ ရှိ ဗလီ ​ကျောင်း သည်​.. နှစ်​​ထောင်​ ​ပေါင်​ များ စွား ကပင်​ ရိုဟင်​ဂျား များပိုင်​ဆိုင်​​သော ဘာသာ​ရေး အ​မွေအနှစ်​ ဖြစ်​ သည့်​ဗလီ ​ကျောင်း ကြီးများ မ​နေ့. မတ်​လ ၂၁ ရက်​​နေ့ က. အစွန်း​ရောက်​ ရခိုင်​ နှင့်​ ဟိန္ဒူများ အုပ်​စု ဖွဲ့ လာပြီ ပြိုပျက်​ ဖျက်​ဆီး က ဗလီ ​ကျောင်း က သစ်​သာ သစ်​​ကောင်းများကို ခိုးယူ သယ်​ သွားခဲ့​ကြောင့်​ ​ဒေသခံ သို့ ​ပြောကြာမျက်​မြင်​ သူများ က​ပြောပါသည်​။
ဤ ကဲ့ သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်​ ရခိုင်​ နှင့်​ ဟိန္ဒူများ လူမျိုးများ က ရိုဟင်​ဂျား ပိုင်​ ​နေအိမ်​ ​တွေ ဘာသာ ​ရေး ဗလီ ​ကျောင်း ​တွေကို ​နေ့စဉ်​ နဲ့ အမျှ မီးရှူိ့ပြိုပျက်​ ဖျက်​ဆီး ပြီး အစအန. မကျန်​​အောင်​ လုပ်​​နေခြင်း အား အစိုးရ ကို တိုင်​အား​ပေး အား​မြောက်​ ရာ​ကြောင်း ထင်​ရှား ​နေပါသည်​ ။
Labels: 2018, Destroy, mm, ငါးရန့်ချောင်း, ဗလီ, ဘူးသီးတောင်, သတင်း